प्रधानमन्त्रीसँग कति छ अधिकार ? « janaaasthanews
प्रधानमन्त्रीसँग कति छ अधिकार ?
प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०७७, सोमबार १०:१२
राज्यका तीनवटा अंग सरकार, संसद् र न्यायालय हुने भए पनि कार्यकारी अधिकार भएकाले सरकारलाई मुख्य मानिएको हो । तीनै अंगमा विभिन्न संवैधानिक र कानुनी अधिकार हुने भए पनि सेना, प्रहरी, प्रशासन, मुलुकको बजेट तथा शान्ति सुरक्षाजस्ता प्रमुख विषय कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले सरकारलाई बढी शक्तिशाली मानिन्छ । बेलायती मोडेलको संसदीय प्रजातन्त्रमा कार्यकारी अधिकार पाएको सरकारलाई खासमा कति अधिकार हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री दलको कि दल प्रधानमन्त्रीको ? दलको मातहत प्रधानमन्त्री हो कि प्रधानमन्त्रीले चाहेबमोजिम दल सञ्चालन हुने हो ? केपी ओली वास्तविक अध्यक्ष र पुष्पकमल दाहाल मानको खातिर कार्यकारी अध्यक्ष वा के हो ? के प्रधानमन्त्रीले बहुमत भएपछि जे पनि गर्न सक्छन् ? प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्् हेरफेर गर्न कसैको सल्लाह र सुझाव आवश्यक पर्दैन ?
संविधानको धारा ७४ मा ‘नेपालको शासकीयस्वरूप बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ’ भनिएको छ । धारा ७५ ले चाहिँ कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भनेको छ । धारा ७६ (१) ले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र ७६ (९) ले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद्् गठन गर्ने, ७६ (१०) ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने, मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने किटानी व्यवस्था गरेको छ ।
संविधान र कानुनमा संसदीय भावना (लेजिस्लेटिभ वील) हुन्छ । शब्द र भावना (लेटर एण्ड स्पिरिट) सँगै गाँसिएका हुन्छन् । संविधान र कानुनलाई शब्दमा मात्र बुझ्नुहुन्न र भावनाको मात्र व्याख्या पनि गर्नु हुन्न । लेटर र स्पिरिट दुवैलाई पक्रनुपर्छ । विधिशास्त्रीय मूल्य, विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता र मुलुकको राजनीतिक–सामाजिक इतिहास समेतको ख्याल गरी संविधानलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संविधान कसले बनायो ? यत्तिकै हावामा उडेर आयो ? संविधान कागजको ठेली हो ? यो संविधान कानुन पढ्ने कुनै बिदार्थीले विश्वबिद्यालयमा पेश गरेको शोधपत्र (थेसिस) हो ? संविधान गीताजस्तो ग्रन्थ हो ? संविधान त मुलुकको सर्वाेच्च कानुन हो । संविधान जनताको समर्थनमा बनेको राजनीतिक–कानुनी दस्ताबेज हो । बेलायती प्राध्यापक विधिशास्त्री मिकी डायस (१९२१–२००९) ले कानुन राजनीतिशास्त्रको विषय हो (ल इज द म्याटर अफ पोलिटिक्स) भनेका छन् । अर्थात् संविधानको व्याख्या कानुनी शव्द मात्र हेरेर राजनीतिशास्त्रलाई बेवास्ता गरी प्राविधिक हिसाबले गर्न मिल्दैन । शब्दको मात्र प्राविधिक व्याख्या गर्ने हो भने त्यो यान्त्रिक हुन जान्छ । संविधानमा जनता र राजनीतिक दल अविछिन्न रुपमा जोडिएर आएका हुन्छन् । निर्वाचनमा दलको घोषणा पत्र हुन्छ । दलको चुनाव चिह्न हुन्छ ।समानुपातिकसमेत मत पाएर संसद्को गठन हुन्छ । संसद्मा संसदीय दल हुन्छ । संसदीय दलले नेताबाटै प्रधानमन्त्रीको चयन गर्छ त्यो प्रक्रिया पूरा गरेको व्यक्तिलाई बल्ल राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउने हो । राष्ट्रपतिले दलको बहुमत हेर्ने हो । दलकै नेता भएको हेर्ने हो । यसरी दलीय प्रजातन्त्रमा दलको प्रधानमन्त्री हुने हो । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि मात्रै मुलुकको कार्यकारी हुने हो । त्यो प्रधानमन्त्री पूरै नेपालीको हो । अब यहाँ फेरि प्रश्न उठ्छ– त्यसो भए प्रधानमन्त्रीलाई असीमित अधिकार हुन्छ कि हुन्न ? वा प्रधानमन्त्री मन्त्री छान्न पूर्णतः स्वतन्त्र हन्छ कि हुन्न ? यहाँ दुई कुरा हुन्छन् । एउटा हुन्छ–कानुनतः र अर्काे व्याहारतः । अर्थात् डिजुरे र डिफ्याक्टो ।
कानुनतः प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री छान्न फलानो–फलानोसँग सल्लाह गर्नै पर्ने बाध्यता छैन । तर, यो कुन प्रणाली हो ? हामीले बुझ्नुपर्छ । संसदीय प्रणाली त हो तर बहुदलमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली हो । अर्थात् दलको नीति, शक्ति, बल, सहयोग र समर्थनमा मात्र कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने हो । त्यसो हुनाले निर्विकल्प अधिकार र स्वतन्त्र प्रधानमन्त्रीको वकालत गर्नु वाहियात हुनजान्छ । त्यसो भनेर हरेक कुरा सोधेर मात्र गर्न आवश्यक पनि हुन्न । त्यसरी कसैले भनेको पनि छैन । तर, दलीय प्रजातन्त्र भएकाले दलको भूमिकालाई अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ र ? कि यो अमेरिकी राष्ट्रपतिको जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हो ? दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी अर्थात् सचिवालयमा सल्लाह, सुझाव र आवश्यक परामर्श गरेर अघि बढ्दा त्यो लोकतान्त्रिक प्रणाली र दलीय व्यवस्थाको भावना अनुकूल हुन्छ । जस र अपजसको सम्पूर्ण दोष प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लै लिनु पनि पर्दैन । यसरी प्रधानमन्त्रीलाई असीमित अधिकार छ भन्ने भ्रम पाल्दै व्यवहार गर्दा विगतमा दल दर्तासम्बन्धी अध्यादेशको हालत के भयो, त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।
यो दलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । दलकै प्रधानमन्त्री छानिने हो । संसदीय दलमा बहुमत पनि दलकै हुन्छ । जे पनि कार्य गर्दा दललाई सोधी–सोधी गर्ने भन्न खोजेको होइन । तर, एउटा राजनीतिक संस्कार र नैतिकता भन्ने हुन्छ । संविधानवादको विश्वव्यापी मूल्यबाट हेर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भएको संवैधानिक अधिकार असिमित अधिकार होइन । संसारमा कुनै पनि व्यक्ति र संस्थालाई असीमित र अनियन्त्रित अधिकार छँदै छैन । गुण र दोषको भागीदार प्रधानमन्त्री मात्र हुने प्रणाली यो होइन । प्रधानमन्त्रीको निर्णयबाट सिर्जित राजनीतिक वातावरणको जस्तोसुकै प्रतिफल नेकपाले भोग्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री छान्ने अधिकार संविधानले दिएको त छ तर त्यसलाई शब्दमा मात्र बुझ्नुहुन्न । भावना र दलीय प्रजातन्त्रको मर्मअनुसार बुझ्नुपर्छ । यसरी विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई आफूले गर्ने निजी कार्यबाहेक सबै काममा असिमित अधिकार भन्ने केही छैन । एउटा प्राइभेट कम्पनीमा समेत मालिकले जे पनि आफूखुशी निर्णय गर्दैन ।
प्रताप हराएका प्रतापीहरू
सपनाको जहाजमा रहरको बोइङ चलाएका स्वघोषित दुई क्याप्टेनको अप्राकृतिक सम्बन्ध
द्वन्द्वकालीन घाइतेको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने
द्वन्द्वकालिन समयमा घाइते भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुको सरकारले
नेकपाको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री तथा
शेयर बजारमा एतिहासिक कीर्तिमान
शेयर बजारले फेरिपनि एतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको छ । साताको